तिलस्मी [शब्द प्रयाेग]
‘तिलस्मी’ शब्द आफैँमा रहस्यमयी शब्द हो । तिल एउटा वनस्पति हो भन्ने तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । तिलको छोप हालेर बनाएको काँक्राको अचार, करेलाको अचार, इस्कुसको तरकारी इत्यादि ! तिललाई संस्कृत साहित्यमा पनि रहस्य सूचक वनस्पति अर्थात् अर्थका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । तिलको पूजा–आजामा पनि प्रयोग हुन्छ । तिलानी पानीले छम्केर शुद्ध बनाउने चलन छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यात्री कवितामा ‘तिलस्मी’ शब्दको प्रयोग मेरालागि पहिलो अध्ययन थियो । यो शब्दले त्यतिबेलाको मस्तिष्क निक्कै घोचेको थियो । नेपाली गुरुलाई निक्कै हैरान लगाएको सम्झना छ । यो शब्दको अर्थ आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गर्ने संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाट जस्ताको तस्तै ‘असम्भव घटना वा अनपत्यार कामकुरा भएको, जादुगरी वा चटकजस्तो ।’
देवकोटाले भने -
‘छुन्छ तिलस्मी करले उसले
सेवक हरूको माथ ।’
जादु भनेको आँखाको भ्रम हो । चटक हो । तिलस्मी भनेको चटक नभए पनि भ्रम केही हदसम्म हो, पुरै होइन । तिल भित्र रहेको तेल नाङ्गो आँखाले देखिन्न । पेलेर तेल निकाल्न सकिन्छ । एउटा समयमा त्यहीँ भएको कुरो समेत अर्को प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा त्यो गुण उत्पन्न नहुनु ‘तिलस्मी’ हुन्छ । तिलमा भएको तेल पेलेर निकाल्नु । तिल् र अस्मी भएर तिलस्मी बन्छ । तिलमा ‘अस्मी’रहेको तेल । त्यो नै तिलस्मी हुन्छ । राहुल साँकृत्यायनले पनि तिलस्मी शब्दको प्रयोग गरेका छन् । जबजब यो शब्द देखिन्छ, एक तमासको अलग्गै अनुभूति अनुभव गर्ने गर्दछु म । यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत अनुभव हो । कुनै शब्दले कसैको अन्तस्करणमा प्रभाव पार्दछ, त्यो व्यक्ति अनुसार फरक पर्दछ । तिलस्मी शब्द मेरा लागी त्यस्तै शब्द हो । यहाँ आज चर्चा गर्न खोजिएको ‘तिलस्मी’ भनेको तपाईं हामी भित्र लुकेर रहेको सुख, खुशी र आनन्दको हो ।
संसार सुखमय छ कि दुःखमय छ भन्ने बहस कहिल्यै सकिन्न । यो दृष्टिकोण हो । समय सुदर्शन चक्र हो । चल्छ । रोकिन्न । कसैका लागी एकै पल पनि रोकिन्न । समय बराबर चल्छ । यसको काम नयाँ सजाउने, भएको थोत्र्याउने, थोत्रिएको मार्ने चक्र निरन्तर चलाउनु हो । अंग्रेजी भाषाका कवि थोमस ग्रे ले भने ‘आज फूल मुस्कुराउँछ, भोलि मर्छ’ । मुस्कान सधैँ रहँदैन । परिवर्तन समयको बिकार अर्थात परिणाम हो । जहाँ समय छ, त्यहाँ परिवर्तन छ । हामी त्यही समय भित्र छौं । त्यो निष्ठुर समय आज हामीलाई शिशु बनाउँछ, बालक, यौवन, युवा अनि बृद्ध ! अब डाँडाको जुन । डुब्न कत्तिबेर पनि लाग्दैन । समय ।
भ्रम । यथार्थको भ्रम माया हो । अचम्म छ । यथार्थको पनि कहीं भ्रम हुन्छ ? अब हेर्नुस् कैसे ! संसार परिवर्तनशील छ । सबै परिवर्तन हुन्छ । हाम्रा आफन्त छन् । कोही हामी भन्दा बुढा छन्, कोही जवान । कोही मर्नै लागेका होलान् ! को कतिबेला मर्छ भन्ने कसलाई के थाहा ? तपाईं पहिले कि म पहिने ? अगले के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । तर पनि हामी १५र२० बर्ष पछी सेवा निवृत्त (रिटायर) भएर के गर्ने भन्दा भन्दै अहिल्यै ‘टायर’ हुन्छौं । यो यथार्थको भ्रम हो । यो नै माया हो । यक्षले युधिष्ठिरलाई सोधे रे ‘तिमीलाई के अचम्म लाग्छ ?’ भनेर । धर्मराज युधिष्ठिरले जवाफ दिएछन्, ‘लास पोल्दै छन, कोहि रुँदै छन् ! पोल्ने र रुने दुबैले सोच्छन यो मर्यो तर म मर्दिन !’ यक्ष प्रसन्न भए रे । हाम्रो पनि त्यै हो । अर्को मर्यो, म मर्दिन । यो नै माया हो । यो नै यथार्थको भ्रम हो । ओशोका भाषामा– ‘मान्छे ‘वेदान्त’ को चर्चा गर्दा गर्दै ‘वेदन्त’ (दाँत नभएको) हुन्छ र पनि चर्चा सकिन्न !’ यो नै यथार्थको भ्रम हो ।
आफू खुशी र तृप्त भावले भोग गर्नु भनेकै संसारबाट सुख, खुशी र आनन्द हासिल गर्नु हो । बस्तुमा न सुख छ, न दुःख । त्यो त हामी भित्रको अनुभव मात्रै हो ।
संसारको बनावट नरिवल फल जस्तो छ । फल त छ तर निकाल्न नजान्नेका लागि केहि छैन ! हुँदैन । निकाल्न जान्नेले त्यो बहुगुणमयी फल भोग गर्दछन । नजान्ने त्यत्तिकै आफल–ताफल गरेर नरिवलको भारी बोकेर थाक्छन । पहिले फल हो भन्ने पत्याउन नै गाह्रो । जटा ताछ्यो, झन् कडा बोक्रो आउँछ । फुटाउन नै गाह्रो । अब फुटाएर मात्रै भएन, त्यहाँ बाट गुदी कोट्याएर निकाल्न गाह्रो । फल भोग्न सजिलो छैन । कला चाहिन्छ । नरिवल । संसार पनि त्यस्तै तिलस्मी छ । रामकृष्ण परमहंसका भाषामा जे हो त्यो देखिन्न, जो होइन त्यशी देखिन्छ ।
संसार (नरिवल)का खोष्टा, जटा र कडा काठ समेत फ्याँके पछी रहन्छ शुद्ध नरिवल । यहाँ सम्मको प्रक्रिया तिलस्मी हुन्छ । आफ्नो अलग्गै अस्तित्व स्वीकार्नु नरिवल हो । नरिवल फल भए पनि स्याऊ, अंगुर जस्तो सोझै खान मिल्दैन । होस् पु¥याएर काम गर्नु पर्छ । जतन गरेर निकाल्नु पर्छ । कडा प्रहार, जतन संग ! कस्तो बिचित्रको संयोग हुन्छ यहाँ ‘जोर से मारो मगर प्यार से’ ! हामी तिलस्मी जनावर हौँ । घोडा जन्मिने बित्तिकै घोडा नै हुन्छ । गाई पनि गार्इ नै हुन्छ । मान्छेले मान्छे हुन धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । यो नरिवलकै प्रतीक हो । हाम्रा हरेक क्रियाकलाप उद्देश्य लक्षित हुन्छन । उद्देश्य नभएको काम त्यत्ति रोचक हुँदैन । खाना खाँदा समेत ‘बाँच्ने’ उद्देश्य हुन्छ । यो साधारण प्रक्रिया भन्दा केही बाहिर निस्किएर एकैछिन हेरौं ।
ज्ञानेन्द्रीयले सँधै सहि सन्देश दिंदैनन् । आकाश नीलो देखिन्छ, वास्तवमा त्यहाँ नीलो कुनै वस्तु हुँदैन ! समुद्र पनि निलै देखिन्छ । यो भ्रम हो । झुठो सन्देश । अमला खाने बित्तिकै पानी पिउँदा गुलीयो स्वाद आउँछ । यो अर्को झुठो सन्देश हो । स्पर्स, गन्ध र शब्दको भ्रम त झन् कति हो कति ! अब देखेको र सुनेको कुरो कसरी नपत्याउनु ? यहाँ हामीलाई ‘नरिवलको जटा’ले मात खुवाउँछ । जटा भित्र फल छैन ! संसार अनुभव हो । हरेक वस्तु अनुकुल र प्रतिकुलको हाम्रो दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छन । आफूलाई अनुकुल भए सुख, प्रतिकुल भए दुःख ! यो नै साधारण मापदण्ड हो सुख र दुःखको । तर यो जटा मात्रै हो । यदि धैर्यपूर्वक हेर्याे भने वस्तुमा न सुख छ, न दुःख नै । जब सुख र दुःखको भेद सकिन्छ अनि एक तमासको खुशी र आनन्द मात्रै बाँकी रहन्छ । जब निकास छैन भने त्यसलाई हात–पाऊ मारेर जुध्नुको कुनै अर्थ छैन । एउटा उदाहरण हेरौं-
काठको टुक्रो पानीमा उत्रनलाई उसले कुनै बल लगाउनु पर्दैन । आफैं उत्रिन्छ । सिकारु मान्छे पौडी खेल्न निक्कै हात–पाऊ मार्नु पर्छ । सिपालु मान्छे न्युनतम प्रयासले पनि पानीमा आनन्दले तैरिन्छ । यो कला हो ।
यो नै संसार जिउने कला हो । सत्यनारायण गोयन्का (बिपस्याना ध्यान केन्द्रका संस्थापक) का भनाईमा धर्म जीवन जिउने कला हो, संसार सुखमय बनाउनु नै कला हो ।
उपलब्ध बिषयमा आफू खुशी र तृप्त भावले भोग गर्नु भनेकै संसारबाट सुख, खुशी र आनन्द हासिल गर्नु हो । बस्तुमा न सुख छ, न दुःख । त्यो त हामी भित्रको अनुभव मात्रै हो । यहि अनुभव निरन्तर मन्थन गरेर नरिवलको जटा–काठ इत्यादि छुट्याएको जस्तो छुट्याएर लाने अभ्यास गर्दा हाम्रो ‘तिलस्मी’ गुण आनन्द आफैं उजागर हुन्छ । खुशी आफैं होईन्छ । बाह्य वस्तुमा न खुशी छ, न सुख छ न त आनन्द नै ! यो आफू भित्रै लुकेको छ । निरन्तरको अभ्यासले यो उजागर हुन्छ । अभ्यास नै यसको साँचो हो, यसैले आफ्नो आनन्द खुल्छ ।
खप्तड बाबाको एउटा अभ्यास सापटी लिएर यो प्रसंग टुंग्याउँछु । एउटा कागजमा ठूलो ‘त्’लेखौं । एकातिर ‘म’ लेखौं । अर्को तिर ‘मेरो’ लेखौं । यो ‘म’खोज्ने अभ्यास हो । अब हाम्रो शरीर लगायत संसारमा भएका सबै वस्तुबाट ‘म’ निकाल्ने कोसिस गरौँ ।
मेरो : मेरो हात, मेरो खुट्टो, मेरो नाक, मेरो कपाल, मेरो मुटु, मेरो फोक्सो, मेरो दिमाग, मेरो मन, मेरो बुद्धि, मेरो खेत, मेरो भैंसी... निरन्तर मेरो ! लेख्दै जानुहोस् । मेरो सबै मेरो हुन्छ । तर ‘म’ कहिल्यै फेला पर्दैन ।
यो हुँदै नभएको ‘म’ को अहङ्कार स्थापित गर्न किन यत्रो लडाईं ? के को माथा फोराई ? यै शरीर एकैछिनमा लड्छ । मर्छ । हुँदै नभएको ‘म’लाई किन यत्रो प्राथमिकता ? प्रश्न आफैं उत्तर बनेर आउँने छन् । अभ्यास गर्नु होला । यो नै ‘तिलस्मी’ हो । तिलको तेल निकाल्ने प्रक्रिया हो । सुखको खोज हो । आनन्दको अभ्यास हो । अब फेरि भन्नुहोस्-
सेवकहरुको माथ !
कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री ...!
अभ्यास गर्नुहोस्, यो तिलस्मी हात पहिल्याउनुहोस् र आनन्दित हुनुहोस् भन्ने कामना सहित धर्मो रक्षति रक्षितः ।